Keyboard Bluetooth Wireless Wireless ho an'ny iPad Targus AKB32ES | Vaovao IPhone
Kitendry Bluetooth mora vidy ho an'ny iPad Targus AKB32ES
Ny fitendry fitendry izay natolotr'i iOS dia mamela zavatra maro irina raha mila izany ianao manorata lahatsoratra somary lava noho izany dia tsara kokoa ny mampiasa klavier tsara hahafahantsika miala amin'ny lalana.
Eny an-tsena dia misy safidy maro hafa fa saika samy manota avokoa izy rehetra: ny vidiny tafahoatra izay tsy manonitra. Izay no antony itondranay anao a Kitendry Wireless Bluetooth miaraka amina vidiny tena manintona: Targus AKB32ES.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fifandraisana Bluetooth, azonao atao ny mampiasa azy amin'ny maodely iPhone na iPad, na dia amin'ny fitaovana hafa toy ny consoles na smartphone na tablette hafa eny an-tsena aza. Mba hamafana ny klavier dia ampiasaina ny bateria roa izay manome a mizaka tena hatramin'ny fito volanaAnkoatr'izay, ny LED dia hanondro rehefa ilaina ny manolo azy ireo.
Amin'ny ambaratonga fampiononana, ny kitendry Targus AKB32ES manolotra fironana kely mba tsy hijaly ny tanantsika amin'ny fandalinana ny minitra dia vita ny ezaka tsy ilaina. Ny mombamomba azy dia ambany mombamomba azy ary misy ny sasany manolotra fiasa manokana an'ny iPad toy ny fikarohana Spotlight na famerenana mozika. Marihina fa espaniola ny fitendry ka manana endri-tsoratra toa ny 'ñ'.
Ary farany, raha mandeha matetika ianao, dia tsy hanelingelina ny valizyo ny fitendry an'ity keyboard Bluetooth ity tena maivana ary kely ny habeny.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ity keyboard Bluetooth ho an'ny iPad ity dia ny vidiny ary izay latsaky ny 32 euro dia azonao izany, vidiny mora tokoa ho an'ny klavier fanatsarana.
rohy: Vidio ny klavier Bluetooth Targus AKB32ES
Misimisy kokoa momba ny The Best of iOS: Ireo kojakoja tsara indrindra ho an'ny iPhone sy iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Kitendry Bluetooth mora vidy ho an'ny iPad Targus AKB32ES
Sony nandefa ny mozika azy manokana hifaninana amin'ny Spotify
Aiza ny ranoko? dia havaozina amin'ny fanampiana ambaratonga 20 fanampiny